Fikarohana ara-tsosialy: Nahoana, rahoviana & ahoana
Navoakan'i Ariadne Labs teo am-boalohany tamin'ny 13 martsa 2020 teo amin'ny lohateny hoe "Fikisahana ara-tsosialy": Tsy orampanala ity ”| Nohavaozina ny 14 martsa 2020
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny olona amerikana iray sy ny toy izany, mirakitra fampahalalana sy firesahana momba an'i Etazonia Nefa maro be ny atiny dia mety hifanaraka amin'ny firenena sy ny kolontsaina ihany koa eto amin'izao tontolo izao.
Nataon'i Asaf Bitton, MD, MPH
Fantatro fa misy fisafotofotoana momba ny zavatra tokony hatao manaraka ao anatin'ity vanim-potoana tsy fahita amin'ny pesta ity, ny fanakatonana an-tsekoly ary ny fanakorontanana ara-tsosialy. Amin'ny maha-dokotera mpitsabo voalohany sy mpitarika ny fahasalamana ho an'ny daholobe ahy, olona maro no nanontanian'ny ahy ny hevitro, ary homeko azy eto ambany miorina amin'ny fampahalalana tsara indrindra azoko androany. Ireto ny fomba fijeriko manokana ary ny dingana ataoko dia miatrika ny dingana ilaina.
Ny azoko lazaina mazava dia ny ataontsika, na tsy ataontsika, amin'ny herinandro ambony dia hisy fiantraikany goavana eo amin'ny eo an-toerana ary angamba ny fombafomba nasionaly coronavirus. 11 andro eo ho eo monja aorian'i Italia ( angon-drakitra amerikanina ) isika ary amin'ny ankapobeny dia an-dàlana hamerina izay indrisy mitranga any ary manerana an'i Eoropa sisa tsy ho ela.
Amin'izao fotoana izao, ny fanjonoana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fifandraisana ary ny fitomboan'ny fitiliana dia ampahany amin'ny paikady ilaina ihany. Tsy maintsy mifindra amin'ny fanalavirana pandemandena isika amin'ny alàlan'ny fihenjanana ara-tsosialy miparitaka, tsy mahazo aina ary feno. Midika izany fa tsy ny fanakatonana ny sekoly, ny asa (araka izay azo atao), ny fivorian'ny tarika ary ny hetsika ho an'ny daholobe, fa koa ny fanaovana safidy isan'andro isan'andro ny tsy hisafidianany ny Flatten The Curve etsy ambany.
Ny rafi-pahasalamantsika dia tsy ho afaka hiatrika ireo tarehimarika andrasana izay mila fikarakarana akora raha toa ka tsy manangona ny herim-po isika ary hifanentana amin'ny fiaraha-monina manomboka izao. Amin'ny andro tsy tapaka dia manana fandriana ICU manodidina ny 45000 izahay, izay azo averina ao anaty krizy 95 000 ( angon-drakitra amerikana ). Na ny fanandramana mandefitra aza dia milaza fa raha mihazona ny fironana misy areti-mifindra ankehitriny dia mety hihoatra ny fahatapahanay (eo an-toerana sy amin'ny firenena) ny fiandohan'ny volana aprily. Noho izany, ny paikady tokana mahatafintohina antsika momba ny fitaka dia ireo izay ahafahantsika miara-miasa ho vondron'olona iray hitandroana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fijanonana mitokana.
Ny fahendrena, sy ny filana, amin'ity endrim-po mahery vaika ity, aloha, ary mahery vaika azo jerena eto . Manentana anao aho mba hanokana fotoana iray handehanana ireo tabilao ifampiresahana - hamindra ny tokatrano momba ny zavatra tokony hataontsika izao izy ireo mba hialana amin'ny krizy ratsy kokoa any aoriana. Ireo lesona ara-tantara sy niainan'ireo firenena eran'izao tontolo izao dia naneho antsika fa ny fanaovana ireo zavatra ireo tany am-boalohany dia mety hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny halehiben'ny fipoahana. Ka inona no dikan'izany fampivoarana ara-tsosialy ho fanamafisana izany isan'andro, rehefa esorina ny sekoly?
Ireto misy dingana vitsivitsy azonao atao manomboka izao mba ho fiarovana ny fianakavianao sy hanao ny anjaranao hisorohana ny krizy ratsy kokoa:
1. Mila manosika ny mpitondra eto an-toerana sy ny fanjakantsika ary ny nasionaly isika hanidy ny sekoly sy ny toerana ho an'ny daholobe ary hanafoana ny hetsika rehetra sy ny fivorian'ny vahoaka izao .
Ny valim-bohitra eo an-tanàna amin'ny alàlan'ny fandraisan'ny tanàna dia tsy hisy fiantraikany ilaina. Ilaintsika ny fomba fiasa an-tanindrazana, mandritra ny fotoan-tsarotra. Mifandraisa amin'ny solontenanao sy ny governemantanao mba hamporisika azy ireo hanamboatra fanakatonana ny fiovana. Hatramin'izao dia enina fanjakana no efa nanao an'izany. Ny firenenao dia tokony ho iray amin'izy ireo. Ampirisiho koa ny mpitondra mba hampiakatra vola ho fanomanana vonjy maika sy hanao ny fanitarana ny coronavirus fitiliana ho laharam-pahamehana haingana sy avo indrindra. Ilaintsika koa ny mpanao lalàna mba hanao hetsika fialam-bidy tsara kokoa ary hahazo tombony amin'ny asa mba hanampiana ny olona handray ny antso tokony hijanona ao an-trano dieny izao.
2. Tsy misy kilalao, na fety, torimaso, na fianakaviana / namana mitsidika trano sy trano tsirairay.
Tena mafy izany satria izany dia. Izahay dia manandrana mamorona elanelana misy eo amin'ireo vondrona fianakaviana sy eo amin'ny olona tsirairay. Mety tsy mahasosotra indrindra an'ireo fianakaviana manana ankizy kely, ankizy manana fahaiza-manavaka na fanamby, ary ho an'ireo ankizy tia milalao amin'ny namany. Fa na dia namana iray ihany no misafidy anao hanananao, dia mamorona rohy vaovao sy mety ho an'ny karazana fandefasana ianao izay tadiavin'ny sekolim-pianarana / asa / hetsika ho an'ny daholobe rehetra. Ny soritr'aretin'ny coronavirus dia maharitra efatra na dimy andro hanehoana ny tenany. Ny olona iray izay mijery tsara dia afaka mamindra ilay virus. Mampidi-doza tokoa ny fizarana sakafo - Tsy azoko antoka fa ny olona manao izany ivelan'ny fianakaviany.
Izahay dia efa nandray ny fepetra ara-tsosialy tafahoatra mba hiatrehana io aretina lehibe io - andao tsy hiheverantsika mavitrika ny ezaka ataontsika amin'ny alàlan'ny fisian'ny fifaneraserana ara-tsosialy any amin'ny tranon'ny olona fa tsy any amin'ny sekoly na toeram-piasana. Averina indray: ny fahendren'ny fifandimbiasan'ny fiandohana ara-tsosialy sy masiaka dia ny hoe afaka mandrodana ny làlambe etsy ambony, manome ny rafi-pahasalamantsika ho tsy zahana loatra, ary mety hampihena ny halavany sy ilàna fotoana lava haharetan'ny fihenjanana ara-tsosialy any aoriana any (jereo izay misy nafindra tany Italia sy Wuhan). Mila manao ny anjarantsika isika mandritra ireo fotoana ireo, na dia misy aza ny tsy fahatomombanana mandritra ny fotoana kelikely.
3. Karakarao ny tenanao sy ny fianakavianao, fa tazao ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Manao fanatanjahan-tena, mandeha an-tongotra / mihazakazaka any ivelany, ary mijanona ho mifandray foana amin'ny alàlan'ny telefaona, horonan-tsary sy ny media sosialy hafa. Saingy rehefa mivoaka any ivelany ianao dia manaova araka izay tratry ny herinao mba hitazomana ny farafahakeliny enina tongotra eo aminao sy ny olona tsy mpianakavy. Raha manan-janaka ianao, dia andramo ny tsy mampiasa fotodrafitrasa ho an'ny daholobe toy ny firafitry ny kianja, satria ny coronavirus dia afaka mivelona amin'ny plastika sy ny vy mandritra ny sivy andro, ary tsy voadio matetika ireo rafitra ireo.
Ny fivoahana any ivelany dia ho zava-dehibe mandritra izao fotoan-tsarotra izao ary mihatsara ny toetrandro. Mivoaha any ivelany isan'andro raha mahay, fa mijanona lavitra ny olona ivelan'ny fianakavianao na mpiara-mianatra aminao. Raha manan-janaka ianao, andramo milalao lalao baolina amin'ny fianakaviana fa aza milalao amin'ny ankizy hafa ny zanakao, satria ny fanatanjahan-tena matetika dia midika fampifandraisana mivantana amin'ny hafa. Ary na dia maniry ny hitsidika ny loholona ao amin'ny vondronay manokana aza izahay dia tsy hitsidika trano fitaizana na mpitsabo hafa izay misy olona be taona mipetraka, satria tandindonin-doza miteraka fahasimbana sy mety maty amin'ny coronavirus izy ireo.
Ny fivoahana ara-tsosialy dia mety hiteraka (raha ny zava-drehetra dia zavaboary sosialy ny ankamaroantsika). Ny CDC dia manolotra toro-hevitra sy loharano hampihenana io enta-mavesatra io, ary ny loharanom-bola hafa dia manolotra paikady hiatrehana ny fihenjanana fanampiny mandritra izao.
Ilaintsika ny mitady fomba hafa hampihenana ny fitokana-monina eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika amin'ny alàlan'ny virtoaly fa tsy ny fitsidihan'ny olona manokana.
4. Manamaivana ny fandehanana amin'ny fivarotana fivarotana, trano fisakafoanana ary ny fivarotana kafe mandritra ny fotoana.
Mazava ho azy fa ilaina ny fitsangatsanganana any amin'ny fivarotana fivarotana, fa andramo ny mametra azy ireo ary mandeha amin'ny fotoana tsy sahirana loatra. Eritrereto angataho ireo fivarotana grika mba hampifamoaka ny olona eo am-baravarana mba hamerana ny isan'ny olona ao anaty fivarotana amin'ny fotoana iray. Aza hadino ny manasa tànana tsara sy alohan'ny dia. Ary avelao ny saron-tava ho an'ny mpitsabo sy ny fonon-tànana ho an'ny matihanina mpitsabo - mila azy ireo hikarakara ireo marary isika. Ataovy hatrany ny halaviran'ny hafa mandritra ny fiantsenana - ary tsarovy fa ny fivarotana enta-mavesatra dia manimba ny hafa ka mividy izay ilainao ary avelao ny olon-kafa. Ny sakafo sy ny sakafo dia mihatsara kokoa noho ny manamboatra sakafo any an-trano raha ny fifandraisan'ny olona manomana sakafo, ny fitaterana ny sakafo, ary ianao. Sarotra ny mahafantatra hoe ohatrinona io risika io, fa avo kokoa noho ny fanaovana izany ao an-trano. Saingy azonao atao ary tokony hanohy manohana ireo orinasanao madinika eo an-toerana (indrindra fa ny trano fisakafoanana sy ny fivarotana) mandritra io fotoan-tsarotra io amin'ny alàlan'ny fividianana fanamarinana fanomezana amin'ny Internet izay azonao ampiasaina any aoriana.
5. Raha marary ianao, mitokantokana ny tenanao, mijanona ao an-trano ary mifandraika amin'ny matihanina amin'ny fitsaboana.
Raha marary ianao dia tokony hiezaka ny manasaraka ny tenanao amin'ny sisa amin'ny fianakavianao ao anatin'ny fonenanao araka izay tratry ny herinao. Raha manana fanontaniana momba ny fahazoan-dàlana ianao na tokony hanao fitsirihana coronavirus, dia afaka miantso ny ekipa fikarakarana voalohany anao ary / na mieritreritra hiantso ny sampan-draharahan'ny fahasalamam-bahoaka any Massachusetts amin'ny 617.983.6800 (na ny departemantan'ny fahasalamam- panjakenanao raha tsy any Massachusetts ianao. ). Aza mandeha mandeha amin'ny tobim-pitsaboana misy ambaratonga fotsiny - antsoy aloha mba hanomezana torohevitra tsara indrindra anao - izay mety ho any amin'ny foibe fitsapana fitaterana fitsidihana an-tsary na telefaona. Mazava ho azy raha antso vonjy maika 911.
Tsapako fa be dia be ao anatin'ireo soso-kevitra ireo, ary misolo tena enta-mavesatra ho an'ny olona sy ny fianakaviana, ny orinasany ary ny vondron'olona maro izy ireo. Mafy ny fifaninanana ara-tsosialy ary mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny olona marobe, indrindra ireo izay manjary marefo eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Fantatro fa misy ny tsy fitoviana ara-stratejika sy ara-tsosialy naorina ao amin'ireo sy ny tolo-kevitra momba ny fifanarahana ara-tsosialy. Azontsika atao ary tsy maintsy mandray fepetra hanamafisana ny valin'ny fiaraha-monina ataontsika amin'ireo olona miatrika ny tsy fandriampahalemana ara-tsakafo, herisetra ao an-tokantrano, ary ireo olana amin'ny lafiny sosialy maro hafa.
Tsapako koa fa tsy ny rehetra no afaka manao ny zava-drehetra. Saingy mila manandrana araka izay fara herintsika amin'ny maha-fikambanana, manomboka anio. Ny fanamafisana ny fivoahana ara-tsosialy, na dia amin'ny andro iray aza, dia mety hitondra fiovana lehibe .
Manana fahafahana mialoha isika hamonjy aina amin'ny hetsika izay ataontsika amin'izao fotoana izao izay tsy hananantsika herinandro vitsivitsy. Ilaina ny fahasalamam-bahoaka. Adidintsika koa ny fiaraha-monina izay ataontsika na dia mbola manana safidy isika ary na izany aza ny ataontsika dia misy fiantraikany lehibe indrindra.
Tsy afaka miandry isika
Asaf Bitton, MD, MPH, dia talen'ny mpanatanteraka Ari Ari Lab Lab ao Boston, MA.
Misintaha PDF azo atao pirinty amin'ity lahatsoratra ity
Te hanavao fandikan-teny ve ianao? Vakio sy mandray anjara amin'ny kaody loharano . Sary avy amin'ny opendoodles
Fa maninona ity tranokala ity? Tamin'ny voalohany, te hizara ny lahatsoratra tany am-boalohany ho an'ny mpifanila trano amiko any Frantsa. Saingy fantatro fa tsy namaky ny teny anglisy izy ireo ary te handray anjara amin'ny ezaka fanalavirana ny fiaraha-monina aho dia nataoko ity tranokala ity.
Mampiasa ny Google Translate ity tranonkala ity mba hampiasaina amin'ny fiteny 109+.
Tranonkala mitovy: https://staythefuckhome.com/ .